Khasaarihi Ka Dhashey Dagaalkii Ka Dhacay Muqdisho Oo Kordhey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Khasaarihi Ka Dhashey Dagaalkii Ka Dhacay Muqdisho Oo Kordhey
Khasaarihi Ka Dhashey Dagaalkii Ka Dhacay Muqdisho Oo Kordhey
August 24, 2010 - By: Abdirahman. A
Waxaa sii kordhey khasaarihi ka dhashey dagaalkii shalay ka dhacay qaybo kamid ah magaaladda Muqdisho oo u dhaxeeyey dhinacyada iskasoo horjeeda.
Saraakiisha Caafimaadka oo aan saaka xirrir la samaynay ayaa ku waramay in khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee gaartay dadka rayidka ee aan waxba galabsan uu kordhey.
Tirada dadka ku dhintey dagaaladii iyo duqeymihi shalay gelinkii dambe ayaa gaaray inka badan 45-qof,waxaana ku dhaawacmay dad ka badan 80-qof oo lagu dabiibaayo isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ee Muqdisho.
Waxaa jirey dad u geeriyooday dhaawacyo culus oo soo gaaray,waxaana isbitaalada Madiina iyo kuwa kale buux dhaafiyey dad qaba dhaawacyo kala duwan.
Ciidamada Dawladda Federaalka oo gacan ka helaayay kuwa AMISOM iyo Ahlu-Sunna Waljameeca iyo kooxaha mucaaradka sida Al-Shabaab iyo Xisbul Islaam ayaa hubka noocyadiisa kala duwan isku adeegsaday dagaalkii shalay.
Degmooyinka Hodan,Howlwadaag iyo Boondheere ayaa saamayn xoogan kasoo gaartay dagaalkaas xilli dadku ay isku diyaarinayeen afur.
Suuqa Bakaaraha ayaa sidoo kale lala beegsaday duqeyn xoogan,taas oo saamayn ku yeelatay ganacsatadii ku sugnayd.
Afhayeenka Al-Shabaab ayaa dagaalkii shalay saacado kahor shir jiraa’id uu qabtay ku dhawaaqay in ay bilaabeen dagaal ay ku magacdareen dhamaystirkii cadawga AMISOM, waxaana uu sheegay in dagaalkaasi uu yahay mid aan joogsanayn ilaa ay AMISOM dalka ka saaraan.